के हो र कसरी fanzine बनाउने | अनलाइन क्रिएटिभहरू
के हो र कसरी fanzine बनाउने
आइरिस गेमन | 05/04/2022 21:00 | प्रेरणा
केहि समय अगाडी, इन्टरनेट नभएको बेला पत्रपत्रिका पढ्नुभयो भने मात्र समाचार थाहा हुन्थ्यो । तपाईले पढिरहनु भएको जस्तो लेखहरू स्व-प्रकाशित, छापिएका, फोटोकपी गरिएका थिए, र हातबाट हस्तान्तरण गरिएका थिए। इन्टरनेट थिएन तर फ्यानजाइहरू थिए।
यदि तपाईं अझै थाहा छैन यो एक fanzine हो, चिन्ता नगर्नुहोस्, यस प्रकाशनमा हामी तपाईंलाई यसको बारेमा जान्न आवश्यक सबै कुरा बताउन जाँदैछौं। र हामी तपाईंलाई विभिन्न उदाहरणहरू पनि देखाउनेछौं।
El fanzine, एक तरिका हो जुन विचार वा विचारहरू संसारको बाँकीसँग साझा गर्न उत्पन्न हुन्छ। यो ढाँचा डिजाइनरहरूको लागि रचनात्मकताको साथ प्रयोगको प्रक्रिया हो।
1 fanzine को अर्थ के हो?
2 fanzine कसरी बनाउने?
fanzine को अर्थ के हो?
त्यो शब्द बाट आउँछ प्रशंसक y पत्रिका। यो सामान्यतया एक शिल्प प्रकाशन हो एक प्राइमर जस्तै, तिनीहरू सामान्यतया जस्तै आकार छन्। यो कला संसारको एक सदस्य द्वारा बनाउन सकिन्छ, जसमा कला, संस्कृति, संगीत, अन्य बीचमा, छलफल गरिन्छ।
El यस प्रकारको प्रकाशनको उत्पत्ति 30 को दशकमा भएको हो, जब विज्ञान कथाका प्रेमीहरू बीच एपिस्टोलरी आदानप्रदान गरिएको थियो।। वर्षौं र प्राविधिक विकासमा, यसको प्रजनन बढ्दो परिष्कृत भयो।
समयको क्रमसँगै, यी प्रकाशनहरूमा छलफल गरिएका विषयहरू राजनीतिक र विरोध मुद्दाहरू थिए। 70 को दशकमा, कभरहरू विरोध र विद्रोहको भावनाको साथ देखा पर्न थाले।
पहिले नै आइपुगेको छ ८० को दशकमा, पङ्क संस्कृतिको साथ युनाइटेड किंगडममा फ्यानजाइनले धेरै व्यक्तिगत सौन्दर्य प्राप्त गर्न थाल्छ।। फन्टहरू, विभिन्न बनावटहरू, रङहरू, र अन्य डिजाइन तत्वहरूसँग प्रयोग सुरु हुन्छ।
यस पंक संस्कृतिमा फ्यानजाइनहरू यति प्रभावशाली थिए कि उनीहरूले समयका धेरै संगीतकारहरूलाई प्रेरित गरे र तिनीहरूको एल्बम कभरहरूको लागि यी प्रकाशनहरूबाट ग्राफिक तत्वहरू अवशोषित गरे।
को पहिलो फ्यानजिनहरू म्यागजिन क्लिपिङहरू बनाइएका थिए, जुन कागजको पानामा टाँसिएको थियो र पाठ थपिएको थियो। यी पाठहरू विभिन्न तत्वहरूसँग हस्तलेखन गर्न सकिन्छ वा कटआउटहरूसँग बनाइएको हुन सक्छ। यदि रङ वा दृष्टान्तहरू आवश्यक भएमा, तिनीहरू हातले वा कटआउटहरूसँग समान रूपमा गर्न सकिन्छ। विकल्पहरू असीमित छन् जब यो एक fanzine बनाउन आउँछ।
आज, यी घरेलु प्रकाशनहरू समान रूपमा बनाइएका छन्, तिनीहरू पनि विभिन्न रूपहरू हुन सक्छन् जस्तै पत्रिका, एउटा सानो पुस्तक, एक व्यक्तिगत कार्ड, आदि। तिनीहरू आकारमा मात्र फरक छैनन्, तर प्रविधिहरू पनि फरक हुन सक्छन्।
छोरा सम्पादकीय टुक्राहरू कलात्मक र स्वतन्त्र तरिकामा उत्पादित, विषय प्रेमीहरूको लागि वा तपाईंको विचारहरू प्रचार गर्ने माध्यमको रूपमा।। अधिक र अधिक डिजाइनरहरूले आफ्नो काम सार्वजनिक गर्न यो ढाँचा प्रयोग गर्दै छन्।
छोरा तिनीहरूका सिर्जनाकर्ताहरू र पाठकहरूको लागि ठूलो मूल्यको वस्तुहरू, किनकि यी सीमित परिसंचरणका साथ प्रकाशनहरू हुन्। सम्पूर्ण डिजाइन र वितरण प्रक्रिया यसको निर्माता द्वारा गरिन्छ।
आजकल, प्राविधिक विकास संग हामी हाम्रो पहुँच भित्र छ यी प्रकाशनहरूको मुद्रण उच्च गुणस्तरको छ र डिजिटल रूपमा पनि डिजाइन गर्न सकिन्छ।
fanzine कसरी बनाउने?
यदि यो के हो भनेर थाहा पाएपछि, तपाईं धेरै जटिलता बिना कसरी बनाउने भनेर जान्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने, हामी तपाईंलाई हात दिनेछौं।
हामीले भनेझैं, ए fanzine विभिन्न विषयवस्तुहरु संग सम्झौता गर्न सक्नुहुन्छ, यो पहिले देखि नै धार्मिक विचार वा व्यक्तिगत कला को अभिव्यक्ति को बारे मा एक प्रकाशन हुन सक्छ।
सबै सम्पादकीय डिजाइन जस्तै, सबै भन्दा पहिले तपाईले अनुसन्धान प्रक्रिया मार्फत जानु पर्छ, पछि रचनात्मक प्रक्रियाको साथ जारी राख्न। यी प्रकाशनहरूको सबैभन्दा ठूलो सकारात्मक बिन्दुहरू मध्ये एक यो हो कि तपाईंले आफ्नो इच्छा अनुसार गर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ कुनै नियम वा सीमाहरू छैनन्।
El तपाईंले लिनु पर्ने पहिलो चरण भनेको तपाईंले कुरा गर्न लाग्नु भएको विषयलाई परिभाषित गर्नु हो। यी प्रकाशनहरूको बारेमा राम्रो कुरा यो हो कि तिनीहरूले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई बढावा दिन्छ, त्यसैले कुनै पनि विषय वर्जित हुँदैन।
सामान्य नियमको रूपमा, यस प्रकारको ढाँचामा सामान्यतया आठ पृष्ठहरू हुन्छन्, त्यसैले तपाईंले यसलाई दिमागमा राख्नु पर्छ छोटो र संक्षिप्त सामग्री सिर्जना गर्नुहोस्।
एकचोटि तपाईंले छलफल गर्नुपर्ने विषय परिभाषित गरेपछि, यो समय हो कागजात चरण सुरु गर्नुहोस्। यस चरणमा तपाईले लेख्नुहुनेछ, कोर्नुहुनेछ, काट्नुहुनेछ, आदि। तपाईंले प्रकाशनको सामग्रीलाई विस्तृत र व्यवस्थित गर्नुपर्छ।
तपाईंसँग जति धेरै सामग्री छ, सही छनौट गर्न सजिलो हुनेछ। यो आवश्यक भन्दा बढी सामग्री हुनु राम्रो छ, त्यसैले जब यो आफ्नो काम को लागी सबै भन्दा राम्रो खोज्न को लागी आउँदछ तपाईले आफैलाई धेरै माँग गर्नुहुनेछ।
तपाईंले पछ्याउनु पर्ने अर्को चरण हो तपाईंले fanzine मा कुरा गर्न चाहनुहुन्छ सबै सामग्री संग एक सूची बनाउनुहोस्। यसले तपाईंलाई कुन जानकारी अरूहरू भन्दा बढी महत्त्वपूर्ण छ भनेर जान्न मद्दत गर्नेछ।
यो लिपिले विचारहरूलाई निश्चित क्रममा व्यवस्थित गर्न पनि मद्दत गर्छ। त्यो हो, पहिले र पछि के कुरा गर्न जाँदै हुनुहुन्छ।
जब हामीसँग पहिले नै विषयवस्तु, सामग्री र स्क्रिप्ट छ, यो ढाँचा निर्णय गर्ने समय हो तपाईको पोस्ट के हुनेछ? यसलाई एक पत्रिका जस्तै तह र कुँदित गर्न सकिन्छ वा, अर्कोतर्फ, यो केवल एक तह आउट भएको रूपमा फोल्ड गर्न सकिन्छ। तपाईंसँग धेरै सम्भावनाहरू छन्।
यस बाहेक, तपाईंले काम गर्ने उपायहरूको निर्णय लिनु पर्छ। यदि, उदाहरणका लागि, तपाइँ मुद्रणको समयमा मानक उपायहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, यो असामान्य उपायहरूसँग गर्नु भन्दा सस्तो हुनेछ।
हामीले पहिले उल्लेख गरिसकेका छौं, फ्यानजाइनहरू सामान्यतया 8 पृष्ठहरू बनाइन्छ, तर तपाईले काम गर्ने सामग्रीको मात्रामा निर्भर गर्दछ, तपाईलाई कम वा बढी चाहिन्छ।
स्टोरीबोर्डको मामलामा जस्तै, तपाईले काम गर्न लाग्नु भएको पृष्ठहरूको संख्याको रूपरेखा बनाउन आवश्यक छ र ती प्रत्येकमा कुन जानकारी वा तत्वहरू समावेश छन् भनेर संकेत गर्नुहोस्।
जब तपाईंसँग सबै कुरा व्यवस्थित हुन्छ, तपाईंले यसलाई डिजाइन गर्न सुरु गर्नु अघि गर्नु पर्ने अन्तिम चरण हो तपाईले काम गर्न लाग्नु भएको कागजको छनोट।
अब तपाईंसँग डिजाइनको चरण मात्र बाँकी छ, यदि तपाईं यसलाई पुरानो शैलीमा कटआउटहरू र हातले दृष्टान्तहरूसँग गर्न जाँदै हुनुहुन्छ वा यसको विपरीत तपाईं यसलाई डिजिटल रूपमा डिजाइन गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भने यो तपाईंको छनौट हो।
zines बनाउनु एक असाधारण डिजाइन प्रक्रिया हो जसको साथ आफ्नो रचनात्मकता विकास गर्न।
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » प्रेरणा » के हो र कसरी fanzine बनाउने
सम्पादकीय चित्रकारहरूमा नजर राख्न
स्पेनिश डिजाइन स्टुडियो जसमा तपाईं काम गर्न चाहनुहुन्छ